डेलिगेट्स समस्या समाधान गरेर मात्रै चुनाव गर्न सल्लाहकार कुल आचार्यको माग
प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७८, शनिबार ०९:३०
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धि विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान व्यक्त गरेका छन्। २०२१-२३ का लागि संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पदकालागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका आचार्यले छिटो भन्दा छिटो चुनाव गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए।
विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मंत्री डा. नारायण खड्कासंग पटक पटक वार्ता भएको जनाइए पनि चुनाव गर्न परराष्ट्रले सहमति, दिए नदिएको भने खुलाइएको छैन। यसैबीच संघको २०२१-२३ कार्यकालका लागि महासचिव पदका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलले अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालय, उजुरी कर्ता तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुसंग समेत छलफल गरेर सहमति खोज्न आह्वान गरेका छन् ।